Otu esi etinye Google Chrome Stable, Beta, ma ọ bụ Akwụsịghị Ụkwụ na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye Google Chrome Stable, Beta, ma ọ bụ na-adịghị akwụ ụgwọ na Rocky Linux 8
October 30, 2021 August 11, 2021 by Jọshụa James
Budata & Bubata igodo GPG
Budata Stable na ma ọ bụ Beta, ebe nchekwa anaghị akwụsi ike
Nhọrọ. Budata Beta ma ọ bụ RPM na-adịghị akwụ ụgwọ
Wụnye ihe nchọgharị Chrome
Nhọrọ. Wụnye Google Chrome Beta / anaghị akwụsi ike
Otu esi ebido Google Chrome
Otu esi emelite Google Chrome
Otu esi ewepu (wepụ) Google Chrome
Google Chrome bụ sọftụwia Internet Explorer kacha eji n'ụwa, yana mmelite na nso nso a na 2021 na Chrome bụ ihe nchọgharị izizi nke ihe karịrị ijeri ndị ọrụ ịntanetị ijeri 2.65. Dị ka ị ga-ama, ịwụnye Rocky Linux 8, dị ka ọtụtụ nkesa Linux, tinye naanị Mozilla Firefox. Otú ọ dị, wụnye Google Chrome na Nkume Linux 8 bụ ọrụ kwụ ọtọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Google Chrome na Rocky Linux 8.
Iji wụnye Google Chrome nke ọma ma nwee ụdị kachasị ọhụrụ na ma ọ bụ kwụsiri ike, beta, ma ọ bụ nke na-akwụghị ụgwọ, ị ga-etinyerịrị ebe nchekwa Google Chrome. Nke a gụnyere ibubata igodo GPG iji chọpụta izi ezi nke nrụnye yana ebe nchekwa n'onwe ya.
Nzọụkwụ mbụ ị ga-achọ ime bụ download na igodo GPG maka nrụnye Google Chrome.
Iji mee nke a, mee ihe ndị a wget iwu:
Ọzọ, bubata igodo GPG dị ka ndị a:
Maka sistemụ dabere na Rocky Linux, ngalaba nchekwa atọ ugbu a kwesịrị ka ebudata ya n'otu n'otu ka etinyere na sistemụ gị. Ozugbo etinyere ya, a na-agbakwunye ha na-akpaghị aka na repolist gị, yabụ na ị gaghị adị mkpa ka ibudata ha ọzọ ka imelite Chrome n'ọdịnihu.
Ka ibudata Google Chrome Ebe nchekwa kwụsiri ike (atụ aro):
Ka ibudata Google Chrome beta Ndozi:
Ka ibudata Google Chrome Ebe nchekwa anaghị akwụsi ike (Dev):
Ugbu a ị nwere ike ịwụnye ngwugwu RPM site na iji njikwa ngwugwu DNF ma ọ bụ YUM, a na-atụ aro ya mgbe niile iji DNF idobe ọkọlọtọ.
sudo dnf install google-chrome-stable_current_x86_64.rpm
ụdị "Y", wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na nwụnye.
Na-esote, nyochaa nrụpụta na ụdị Chrome arụnyere. Nke a gosikwara na arụnyere Chrome nke ọma.
N'aka nke ọzọ, ị nwere ike iwunye Google Chrome Beta ma ọ bụ na-adịghị akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ị budatala ebe nchekwa site na iji wget iwu. A naghị atụ aro ụdị abụọ a maka ojiji kwa ụbọchị, ọkachasị ọ bụghị na desktọpụ isi ma ọ bụ ihe nkesa mmepụta. Otú ọ dị, maka ndị chọrọ ibi na nsọtụ, ị nwere ike ịwụnye nsụgharị ndị ọzọ.
Iji wụnye Google Chrome beta:
sudo dnf install google-chrome-beta_current_x86_64.rpm
Iji wụnye Google Chrome Akwụsịghị (Dev):
sudo dnf install google-chrome-unstable_current_x86_64.rpm
Mara, ndị a anaghị edochi ụdị kwụsiri ike gị, ma etinyere ya iche.
Na-esote, nyochaa nrụnye nke beta ma ọ bụ akwụghị ụgwọ, jiri iwu na-esonụ.
Iji nyochaa beta Google Chrome:
Google Chrome 95.0.4638.40 beta
Iji nyochaa Google Chrome anaghị akwụsi ike:
Google Chrome 96.0.4662.6 dev
Iji gosi na nrụnye Chrome gara nke ọma n'ịgbakwunye ebe nchekwa na ndepụta ebe nchekwa gị. Biko mee ihe ndị a dnf repolist iwu iji hụ na agbakwunyere na arụ ọrụ.
Dịka n'elu, ebe nchekwa atọ niile dị, nke pụtara na ị ga-enweta mmelite n'ọdịnihu na nhọrọ ọ bụla ị kpebiri itinye.
Ugbu a ị wụnye Chrome, ị nwere ike ịmalite ngwa ahụ. Ị nwere ike pịnye iwu a na njedebe iji malite Chrome:
Iji mee Chrome n'azụ wee gaa n'ihu na-eji ọnụ:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Google Chrome. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ ị mepee Google Chrome na Rocky Linux 8, mmapụta ndị a ga-ekele gị:
Wepụ ma ọ bụ hapụ dị ka ọ dị wee pịa OK bọtịnụ ịnọgide.
Ugbu a ị ga-ahụ ihe nchọgharị Internetntanetị Google Chrome n'ikpeazụ dị ka n'okpuru:
Ekele, ị tinyela Google Chrome na sistemụ arụmọrụ Rocky Linux 8 gị.
Iji melite Google Chrome, na-agba ọsọ Mmelite DNF iwu n'ọnụ ọnụ gị:
Rịba ama na nke a ga-emelite ngwugwu niile (akwadoro), dịka ọmụmaatụ, iji kwalite ngwungwu Chrome.
sudo dnf upgrade google-chrome-stable
Iji wepu Google Chrome, jiri iwu a:
sudo dnf autoremove google-chrome-stable
ụdị "Y," wee pịa “Banye bọtịnụ” ịga n'ihu na iwepụ.
Ọ bụrụ na ị nwere beta ma ọ bụ ihe arụrụghị arụrụ.
Iji wepu beta Google Chrome:
sudo dnf autoremove google-chrome-beta
Iji wepu Google Chrome Unstable (Dev build):
sudo dnf autoremove google-chrome-unstable
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi ebubata ngwungwu ọnụọgụ abụọ RPM yana igodo GPG iji wụnye ụdị kwụsiri ike kachasị ọhụrụ nke Google Chrome. N'ozuzu, Chrome bụ ihe nchọgharị kachasị eji na mbara ala, yana 70% nke ndị ọrụ na-eji ya. Cheta, ọ nwere ike bụrụ otu n'ime ihe nchọgharị ịntanetị a na-achọkarị maka nrigbu ụbọchị efu. Debe ya ka ọ dị ọhụrụ, ị ga-adịkwa mma.
Categories Nkume linux Tags Nchọgharị Google Chrome, Nkume linux Mail igodo
Otu esi etinye ModSecurity na Nginx na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye Microsoft Edge na Rocky Linux 8